प्रलेस चितवन र पारिजात स्मृति सन्दर्भ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्रलेस चितवन र पारिजात स्मृति सन्दर्भ
२०७२ बैशाख १३, आईतवार ०२:०७ गते
– प्राडा बद्रीविशाल पोखरेल
प्रगतिशील लेखक सङ्घ, चितवन शाखाले २०७२ वैशाख ५ गते नगरपालिकाको सभाकक्षमा पारिजातको बाइसौँ स्मृति दिवसका दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । ‘पारिजात ः आयाम र प्रवृत्ति’ विषयक बहस कार्यक्रममा त्रिविका सहायक डिन प्राडा ताराकान्त पाण्डे, प्रलेस केन्द्रीय सल्लाहकार प्राडा बद्रीविशाल पोखरेल तथा युवा स्रष्टा तथा प्रलेस चितवन शाखाकी अध्यक्ष सरिता तिवारी बहसको केन्द्र भागमा
थिए । कार्यक्रमका सहजकर्ता बौद्धिक व्यक्तित्व उदय अधिकारी थिए भने कार्यक्रमको औचित्य र सान्दर्भिकता विषयमा डा. धनेश्वर भट्टराईले मन्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए । प्रलेसका सचिव तथा युवा स्रष्टा विमलप्रकाश देवकोटाद्वारा सटीक रुपमा उद्घोषित कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका अग्रज तथा समकालीन सर्जकको उत्साहजनक उपस्थिति थियो ।
सहजकर्ता अधिकारीले विचार अभिभाषक त्रयलाई पारिजातको समग्र सष्टा व्यक्तित्वका आयामलाई सकेसम्म समेटेर सन्तुलित प्रश्नको पेटारो पस्केका थिए । ‘शिरीषको फूल’ उपन्यासलाई प्रसिद्ध समालोचक गोविन्द भट्टले कागजको फूल भनेको र स्वयं पारिजातले उक्त उपन्यास जलाइदिनू भनेको विश्वचर्चित उपन्यास पहिलो प्रश्न बनेको
थियोे । यसमा केन्द्रित रहेर डा. पोखरेलले निराशा, हताशा, भग्नाशालगायत भावना जीवनको अनिवार्य पाटो रहेको र यसलाई निषेध गर्नै नसक्ने मानवीय भावना हो भने । लेखकीय जीवनको विकासका कतिपय चरण समान गतिका हुँदैनन् । क्षणिक निराशा आमप्रगतिवादी लेखकमा पनि उत्पन्न हुन्छ । तर, निराशावाद जीवनको ध्येय हुन सक्तैन । त्यस हिसाबले ‘शिरीषको फूल’ उपन्यास पारिजातको लेखकीय जीवनको ऐतिह्य बुझ्न र त्यसभित्रका सकारात्मक नकारात्मक पक्षबाट साहित्यिक सिकाइ प्राप्त गर्न पनि उपन्यास जलाउनु उचित हुँदैन । यो संग्रहणीय कृति हो । यसलाई संगृहीत गर्नुपर्छ । प्रकाशनमा आएको यो कृति नवशिशुजस्तै सामाजिक सम्पत्ति हो । आमाले चाहेर पनि त्यसलाई तलवितल गर्न मिल्दैन । पारिजातको लेखन क्रम र भ्रम दुवै बुझ्न पनि यो कृति संग्रहणीय रहेको उनले बताए ।
डा. पाण्डेले माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्रीय मान्यतामा कृतिको मापन गर्दै उपन्यासलाई भट्टकै मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गरेका थिए भने सरिता तिवारीले ‘शिरीषको फूल’ उपन्यासको सर्वव्यापकता, लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसिद्धि र त्यस कृतिका माध्यमबाट नारी लेखन उत्साहित बनेको यथार्थ उल्लेख गर्दै यसलाई भट्टको पूर्वमान्यतामा आँखा चिम्लेर सहीछाप गर्न नसकिने विचार प्रस्तुत गरिन् । कार्यक्रममा पारिजातको समग्र लेखकीय बहुआयामिक व्यक्तित्वमा आधारित सवाल–जवाफले सहभागी स्रष्टाहरुमा आकर्षण थपेको महसुस हुन्थ्यो । अस्तित्ववादी विसङ्गतिवादी लेखनबाट ८४ डिग्रीको फेरो पार गरेर पारिजातले प्रगतिवादी लेखनमा प्राप्त गरेको उचाइ विशेष छलफलको विषय बनेको थियो । माक्र्सवादी÷प्रगतिवादी सौन्दर्यशास्त्रीय चिन्तनले व्यक्तिगत तथा लेखकीय जीवनमा आफ्नो पुनर्जन्म भएको पारिजात आफैँले स्वीकार गरेको विषय सभामा
उठ्यो । रोगाक्रान्त अवस्थामा तीन पटकसम्म आत्महत्या गर्न तत्पर पारिजातलाई बहुआयामिक प्रतिभाशाली स्रष्टाका रुपमा सशक्तताका साथ उभ्याउने अभिप्रेरणा तत्कालीन नेकपा चौमका नेताद्वय मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाले गरेको अतिथि वक्ता तथा प्रबुद्ध श्रोताले समेत उठाएका थिए । बहस कार्यक्रममा पारिजातमा लेखन र कर्ममा साम्यता रहेको पक्षलाई तीनै जना अतिथि वक्ताले समर्थन गरे । यसमा तिवारीले अझ खुलेर तत्कालीन प्रज्ञाप्रतिष्ठान र पुरस्कार पारिजातले अस्वीकार गरेको यथार्थता खोलिन् र सहजकर्ताको जिज्ञासामा उनले आफू कसैको फोटोकपी नहुने तर पारिजात आफ्नो लेखकीय जीवनको आदर्श व्यक्तित्व रहेको पनि बताइन् । पारिजातको स्वाभिमानी, उच्च अभिमानी र
उच्च आत्मबलको समेत चर्चा भएको थियो ।
कतिपय प्रगतिवादी लेखकले पारिजातका प्रगतिवादी औपन्यासिक सबल पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको विषयमा जमेर छलफल भएको
थियो । यो विषय समग्र प्रगतिशील तथा प्रगतिवादी सर्जकमा देखा परेको लेखकमैत्री भावनाविपरीत रहेको निष्कर्ष रहेको थियो । नेपाली वाम आन्दोलन चौध चिरा पर्नेबित्तिकै लेखकका बीच रहेको अस्वस्थ व्यवहार कदापि उपयुक्त नरहेको विचार अभिव्यक्त भयो । लेखक, कलाकार भनेको परस्पर विभाजित वाम आन्दोलनलाई सकेसम्म निकट ल्याएर सम्भावित सङ्कट मोचन गर्ने प्रभावशाली पक्ष हो । असहमतिका बीच पनि सहमति कायम गर्दै एकताबद्ध हुनु उन्नत चेतका सर्जकको सही पहिचान हो । कतिपय विमतिका अतिरिक्त इतर लेखन आफ्नो प्रतिभालाई उत्साहित, प्रोत्साहित तथा सम्मानित गर्छ । आमसञ्चारका माध्यमबाट भँगेरा टाउके अक्षरमा लेखकको प्रभावको विस्तार पनि गरेको देखिन्छ, तर यस मामलामा प्रगतिशील लेखन निकै कमजोर रहेको यथार्थमा डा. पोखरेलले विशेष जोड दिए । समारोहमा पारिजात जसरी लेखकीय जीवनमा समाजका सबै खालका कुरुप पक्षलाई उच्छेद गर्न साहित्यिक रुपमा लागिन् । उनी लेखनअनुरुपमा वैयक्तिक जीवनमा पनि सामाजिक अभियन्ता बनेर लागेको विषय एउटा लेखकका लागि के–कति उपयुक्त छ भन्ने जिज्ञासा सहजकर्ताबाट राखिएको थियो । यस विषयमा पनि एउटा देशभक्त, प्रगतिशील तथा लोकतान्त्रिक लेखक समाजको अगुवा भएकाले सर्जकको नाताले सडक, सदन र शौर्य संघर्षको अग्रणी नेतृत्व गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक रहेको उल्लेख गरियो । यस मामलामा पारिजातले २०४६ सालको सर्जकको सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु आमनेपाली लेखकका लागि अनुकरणीय पक्ष रहेको अतिथि वक्ताद्वारा उल्लेख गरियो ।
पारिजात इतर लेखकीय मान्यताका विपक्षमा सम्झौतारहित तथ्य र तर्कसंगत सशक्त प्रतिवाद गर्ने व्यक्तित्व रहेको प्रसङ्ग पनि उठेको थियो । यसलाई पुष्टि गर्ने आधार माक्र्सवादले मात्रै होइन, लोकजीवनले पनि कुरा बाझ्नु मान्छे नबाझ्नु भन्ने लोकोक्तिलाई डा. पोखरेलले अघि सारेका थिए । कुनै पनि लेखकले आफ्ना जीवनका सही वैचारिक आस्था र लेखकीय मान्यतामा अडिग रहेर बहस र विवाद गरे पनि लेखकमैत्री र जनमैत्री भावनामा आँच पु¥याउने काम कदापि गर्नुहुँदैन । किनभने, हजार सिद्धान्तभन्दा एक व्यवहार आमजनमानसमा गहिरो प्रभाव पार्ने विशिष्ट पक्ष हुन्छ । ‘आयो गयो मायामोह’ भन्ने लोकोक्तिले पनि सामाजिकीकरणको प्रभाव स्पष्ट पार्छ । यस विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रगतिवादी सांस्कृतिक आन्दोलनको सूक्ष्म आत्मनिरीक्षणका अभावमा अत्यधिक समय खेर गएको यथार्थ सत्य हो । तर, आग्रह तथा पूर्वाग्रहरहित मान्यताहरुका बीच बहस गर्ने र जुन सही मान्यता लाग्छ, त्यसको पक्षपोषण गर्दा मात्र देश र जनताको आकांक्षा सफलीभूत पार्न सकिन्छ ।
अहिले सिद्धान्तअनुसारको व्यवहारका अभावमा नेपालको प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन कुहिराको काग बनेको देखिन्छ । जननेता मदन भण्डारीले आमजनताको मन जितेर राजनीतिक र राजकीय नेतृत्व हासिल गर्नुपर्छ भन्ने उन्नत जनवादी तथा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेर देश र जनताको सेवामा सबै लागिनपर्दा समस्या सङ्ग्रालिएको हो । कार्यक्रमको निचोड प्रसिद्ध समालोचक डीआर पोखरेलले गरेका थिए । उनी पारिजातले निकै मन पराएका र कुनै–कुनै सन्दर्भमा एक समयमा विवादको घेरामा पनि परेका भनिएका पोखरेलले पारिजातको समग्र लेखकीय जीवनलाई सही र सापेक्षित मूल्याङ्कन गरेको बताए । द्वन्द्ववादी वा प्रगतिवादी सौन्दर्यशास्त्रीय मान्यताका आधारमा ऋणात्मक र धनात्मक पक्षको निक्र्योलमात्र गरेको पोखरेलले बताए । कार्यक्रम अत्यन्त शालीन, गम्भीर तथा विवेचनात्मक रहेको बताउँदै पोखरेलले आगामी दिनमा पारिजातकै विषयमा अझ सामयिक र सान्दर्भिक विषय उठान गर्नुपर्ने बताए । लगभग पाँच घन्टा समयावधिभर अत्यधिक श्रोता सहभागी सक्रिय रहेको यो कार्यक्रममा प्रलेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि श्रेष्ठले पारिजातको कविता वाचन, प्रलेस सदस्य निरज भट्टले स्वागत गरेका थिए । रविकिरण निर्जीव, टीकाराम रेग्मी, ईश्वर कँडेल, सिर्जन अविरल, इन्द्र रेग्मी र मुना अर्याललगायत प्रबुद्ध लेखकले पारिजातको समग्र लेखकीय जीवनमा आधारित रोचक जिज्ञासा प्रकट गरेका थिए ।
द्यौरालीमा राजा र रानी भेटिए, द्यौरालीमा भरिया र भरिनी भेटिए; यी दुई परस्पर विपरीत पंक्तिका आधारमा केलाउँदा सबै साहित्य प्रगतिशील हुँदैन भन्ने निष्कर्ष आउँछ । यससम्बन्धी दार्शनिक पक्षलाई डा. पाण्डेले उल्लेख गरेका थिए । प्रगतिशील साहित्यमा कलापक्ष अपेक्षित कम रहेको विषय एउटा कालखण्डको कुरा हो । सिकारू अवस्थामा र आन्दोलन, संघर्ष तातेको बेला र क्रान्ति जगाउनु पर्ने बेलामा विचार प्रखर कविता लेख्ने कुरा एउटा हो । चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिकालको धङधङीमा लेख्ने कुरा अर्को होला, तर अहिले यो लेखनमा परिष्कार आएको छ तथा कलापक्ष थपिएको छ । तथापि, कला, साहित्यलाई तदनुकूलकै शब्द, शब्दावली, बिम्ब, प्रतीक, लवज र लिवाजका साथ सम्प्रेषण गरियो भने जनमानसमा दबाइको जस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ । पारिजातले रचनामा पात्रको मनोबिम्ब, मनोजगत्, मानसिक अन्तरद्वन्द्वलाई सघन रुपमा अभिव्यक्त गरिन् । यो उनको अर्को वैशिट्य हो । कार्यक्रममा समयाभावले यो पक्ष ओझेल परेको तथा प्रश्नकर्ताको गुनासो सही रहेको सहजकर्ताको भनाइ थियो । कम्युनिस्ट हुनु असल मानिस बन्नु हो भनेर कार्लमाक्र्सले भनेको र माओले जनताबाट लिएको सियो–धागो जनतालाई जतनसाथ फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको अन्तर्यमा जनमनका भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने कुरा रहेको छ । तथापि त्यसलाई पुनर्सिर्जन गरेर र तदनुसार राजनीतिक नेतृत्व तथा कला साहित्यिक अगुवा पंक्ति लागिनपर्दा माक्र्सवादमा मनोविज्ञान छैन भनी विरोधी प्रलाप सुन्नु परेकोे यथार्थ डा. पोखरेलले उल्लेख गरे । मोदनाथ मरहट्ठा, भवनाथ सडौला, हरिहर सवितालगायत विविध धारका प्रगतिशील अग्रज सष्टाको उपस्थितिमा प्रलेस, राष्ट्रिय पार्षद् तथा सशक्त युवा लेखक प्रमोद धितालले टिप्पणीकारका नाताले पारिजात संघर्ष, स्वाभिमान र समर्पणको त्रिआयामिक व्यक्तित्व रहेको उल्लेख गरे ।